Lammiilen Itiyoophiyaa biyya Jibuutii magaalaa Jiibuutii keessatti argaman maqaa Raafa je’uun qabamanii manneen hidhaa – Kichuu
[ September 24, 2021 ] The Rise and Rise of Fascism in Ethiopia	Africa
[ September 24, 2021 ] The Oromia Liberation Army has liberated many districts in Oromia region	News
HomeNewsAfricaLammiilen Itiyoophiyaa biyya Jibuutii magaalaa Jiibuutii keessatti argaman maqaa Raafa je’uun qabamanii manneen hidhaa
BB$ Hagayya 24/2020.
Lammiilen Itiyoophiyaa biyya Jibuutii magaalaa Jiibuutii keessatti argaman maqaa Raafa je’uun qabamanii manneen hidhaa fi daangaa biyyoota lameenii irratti darbatamaa akka jiran gabaafame.
Itiyoophiyaanonni irra jireessi isaanii Oromoo tayan yeroo ammaa maqaa Raafa je’uun manneen jireenya isaanii keessaa guuramanii mana hidhatti naqamaa jiru. Hedduun isaanii ammoo daangaa biyyoota lameenii jiddutti magaalota argaman Dawwallee fi Shiniilee je’aman jiddutti gatamanii daramaa jiru. Qabaan kun isa duraanii irra hamaa tahuu fi mannee jireenyaa illee cabsanii seenun namoota qabaa jiru. Dubartoota heddus qabanii hidhatti guuraa akka jiran baqattoota keessaa kannee BBS qunnaman dubbatan. Dubartoonni hedduunis qabamanii maallaqa Jibuutii Farankaa 10,000 adabbii gubboo kafalanii bahaa jirus je’ame.
Mootummaan Jibuutii nama qofa osoo hin taane Re’ee illee qabee adabbiif maallaqa fudhatee gadhiisaa akka jiru odeessi achi arganne ni ibsa. Yeroo koronaa vaayrasiin hammaatee jiru kanatti namoota hedduu qorannaa tokko malee walitti naquun fayyaa namootaa sodaa keesssa buusee jiras je’amee jira. Jibuutii gandeen akka 01/02/03 fi 04 keessatti akkasuma Sheek Muussee je’aman keessatti qabaan kun akka hammaate baqattoonni Jibuutii BBS itti himanii jiru.
Namoonni qabamanii gara biyyatti darbataman Dirree Dhawaa keessattis bakka turtii koronaa guyyoota erga tursiifamanii qabeenya irraa qabamanii fi maatii isaanii addaan bahan barbaacha ammas gara Jibuutii deebi’aa jiru. Hedduun isaanii ammoo magaalota Jibuutii Ali Sabiih, Gubattoo, fi Shiniilee je’amaniitti ammas qabanii hidhamu.
Jidduu tanatti dararaan lammiilee Itiyoophiyaa irra gayaa jiru ulfaataa akka tahe odeeffannoon nu gahe ni ibsa. Mootummaan Jibuutii lammeelee Itiyoophiyaaf ilaalcha gaarii hin qabne je’amu maqaa Raafa je’uun namoota erga hidheen booda gara biyyatti darbuun waanuma aadeffame je’u baqattoonni Oromoo Jibuutii. Sirbamiinsi mirgi namoomaa lammiilee Itiyoophiyaa addatti Oromoota Jibuutii keessatti argaman irra gahuu kun xiyyeeffannaa mootummoota fi dhaabbiilee mirga dhala namaaf falman hunda jalaa dhokataa dha.
Waajjirri Dhimma Baqattootaa UHNCR Jibuuti itti argamu baqattoota xalayaa UN qabanuu yeroo rakkoo keessa bu’an dirmannaan godhuuf gad aanaa dhaa je’amee jira. Gama biraatin Imbaasin Itiyoophiyaa Jibuuti itti argamu ammoo mootummaa Itiyoophiyaa amma biyya keessatti nama fixaa jiruuf looga, waan tayeef akka lammiilee Imbasii qabutti if ilaallee hin beeynuu je’u lammiilen Oromoo Jibuutii keessatti argaman.
BB$: Marii haala yeroo iratti DR Abdusamad Muhammedii waliin taasifne
“Irreechi dirree galataa malee, waltajjii Kaadiree miti!”